BAIC ကားများရဲ့ Fuel Tank နဲ့ ဆီစားနှုန်းတွေက ဘယ်လိုရှိမလဲ? - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > BAIC ကားများရဲ့ Fuel Tank နဲ့ ဆီစားနှုန်းတွေက ဘယ်လိုရှိမလဲ?
ကားတစ်စီးဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာ ဆီစားနှုန်းသက်သက်သာလား၊ ဆီတိုင်ကီက ဘယ်လောက်ဆံ့လဲ ဒါတွေကို သေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှလည်း ဘယ်လောက်အကွာအဝေးအတွက် ဆီစားနှုန်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
BAIC ကားတွေ ကားဆီတိုင်ကီဘယ်လောက်ဆံ့လဲ၊ ဆီစားနှုန်းဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ သိချင်တဲ့ BAIC ချစ်သူတွေအတွက် BAIC ကားတစ်စီးချင်းစီရဲ့ Fuel Tank နဲ့ ဆီစားနှုန်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆီစာနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ကားတစ်စီးကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် BAIC ကားအမျိုးအစားထဲက မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ car body type တွေကို ‌ရွေးချယ်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Hotline Phone: 09 430 38 888
Maserati သည် Fuoriserie Customization Program အားမြောက်အမေရိက ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချမည်။
NEXT 25 Feb 2022
Global ဈေးကွက်အတွက် အသင့်ဖြစ်နေသည့် V8 Powered Ford Mustang GT 3